NIkki Bella anotsanangura zvikonzero chaizvo zvaakarambana naJohn Cena - Nhau
Kuru Varaidzo Style Nhau Macelebs
Nikki Bella anonyatsotsanangura zvikonzero chaizvo zvakaita kuti John Cena arambane
Kana uchirwa nyeredzi Nikki Bella uye John Cena kupatsanurwa makore maviri apfuura , paive nekufungidzira kwakawanda pamusoro peizvo zvakakonzera kuparara kwavo kwakaputsa uye, gare gare, kuyananiswa kwavo kwakundikana. Dzimwe nhepfenyuro dzakatoti Nikki wa kuyedza kuwana ratings pachokwadi chake show, 'Total Bellas.'
Iye zvino ari kutsanangura zvikonzero chaizvo zvakatungamira kumagumo avo anosuruvarisa. Uye, pamwe zvichishamisa kune vamwe, haasi kupomera John.
Mubhuku rake idzva, 'Asingaenzaniswi' - iro raakanyora nemapatya hanzvadzi Brie Bella - Nikki anotsanangura kuti panguva yake yemakore matanhatu ekudanana naJohn, ivo 'vaitambura kuenzanisa' zvinangwa zvavo zvehukama. Nekudaro, anonyora, sezvakataurwa Zuva nezuva , 'Pane kutendeuka ndokutarisana nazvo, ndakaisundira pasi petipeti ndikafunga kuti ndaigona kunyepedzera senge yakanga isipo. Nekuti ndaitya kurasikirwa nerudo rwangu, ndakaisa chishuwo changu chewanano nevana zvakadzama sezvandaigona. '
Sekutaura kwakaita Nikki kare, John aive atanga kuburitsa pachena kuti kuroora nevana 'vanga vasiri pamenyu kwaari ... izvo zvakaoma,' anonyora mumemoriri yake, 'nekuti kana iwe uchidaro nenzira iyoyo, saka paunowedzera kuda mumwe munhu, ndipo paunonyanya kuzvida zvese. Ndakarega kupa izwi kune izvo zvido, zvakadaro. Ndanga ndave kunetsekana kuti ex wangu anozozvifona ndorega ndichienda. Uye nepo ini ndaida zvinhu izvozvo zvakanyanya - ndaingoda iye zvimwe. '
DailyMail.com inoshuma kuti Nikki anorondedzerawo nguva iyo John akaramba kumusiya parutivi paakaporeswa kubva pakuvhiyiwa kwegore ra2016 kwedhisheni redhisheni mumutsipa wake, sei 'aisatendera chero munhu kumutumira kumba' uye kunyangwe 'akandibatsira kuenda imba yekugezera, kunyangwe yakandiita kuti ndide kufa nenyadzi. '
Kunyangwe achionga nerubatsiro rwake, iyo yaimbove 'Total Divas' nyeredzi yaisiririsawo. 'Ini ndaisakwanisa kumira kuti ndinzwe kushaiwa zvakanyanya, kunyangwe zvaiita senge zvinomufadza kundichengeta,' anonyora. 'Ndinoshuva dai ndakanga ndaona chiitiko ichocho pane zvazvaive: mukana kwandiri kuti ndizive, ndobva ndataura nezvazvo, kuti ndainzwa ndisina kukodzera uye ndisingakodzeri, zvakandityisa zvakandiita kuti ndinzwe kuti ndinotarisirwa. Kusagadzikana kwangu kunoita kuti ndinzwe kana ndisiri kushandira rudo asi panzvimbo pezvo ndichingofarira rudo. '
Nikki anotsanangurawo kuti akarasika sei. Akanga akaisa pfungwa yake pane imwechete pakurasikirwa naJohn zvekuti zvakauya pakurasikirwa kwezvaanoda nezvaaida. 'Nokuramba ndichimuisa pekutanga, uye ndichidzosera izwi rangu kumashure, handina kumupa ruremekedzo rwekunzwa chaizvo nezvandaive ndichiita,' anotsanangura mubhuku rake, sezvakataurwa Isu Vhiki . 'Ini handina kumupa iye, kana hukama hwedu, iyo mukana wekupokana kuti pamwe inogona kubata zvimwe.'
John, anonyora, 'aisaziva kuti ndakanga ndisiri kuwana zvandaida nekuti ini handina kumbotaura chero chinhu.' Aive nechokwadi chekuti aifanira kukwana 'mumakundano ehupenyu hwaJohn hwakabatikana uye hupenyu hukuru,' anowedzera kutsanangura. 'Izvo zvaive zvakakosha kwandiri, zvichimufadza nekumuita kuti agutsikane, ndisingataure zvandinoda ini.'
Nikki akaita zvekufungidzira. 'Nekuti ini ndaifunga kuti aisada kuzvipira, ini handina kuramba ndichikumbira. Nekuti ini ndaive ndakagadzika pane zvandaitenda kuti aida, ndakaita sarudzo dzakawanda ndakamumiririra, kunyangwe ndaive ndichizvirasa pachangu, 'anonyora.
mariah carey 35 carat mhete
Iye zvakare anobvuma kuti ane 'kudemba kuzhinji nezvehukama ihwohwo.' Iyo huru? 'Ndinoshuva dai ndaizozviziva ndiri nani ndisati ndapinda mazviri. Ndinoshuva dai ndaizonzwisisa maratidziro muhupenyu hwangu, uye hukama hwangu nababa vangu chaivo, kuziviswa maitiro andinoita nerudo, miganho, uye nemanzwiro ekusiiwa, 'anotsanangura, sezvakataurwa neDailyMail.com. 'Ndinofunga ndingadai ndakadzivisa zvimwe zvakaitika. Nekuti baba vangu vakasiya ndiine makore gumi nemashanu, ndakadzidza kuzadza maburi. Ini ndinotarisira kusiiwa kumashure uye kutsvaga nzira yekusatarisana kana kubvuma iyo yekusurukirwa uye yekusiiwa. '
Paakakwikwidza mumwaka 25 we 'Kutamba Nenyeredzi' mu2017, iye 'akamuka chaizvo,' anonyora. Aigara ega mufurati yaakapihwa naABC. 'Ndakafarira manzwiro aiita kuva musikana akazvimiririra uyo. Ini ndanga ndakagara muchitokisi ndisingazive kuti musuwo hauna kukiyiwa uye kuti ini ndange ndazvivaka ini, 'anotsanangura, sezvakataurwa naNesu.
Eric McCandless / ABC kuburikidza neGetty Mifananidzo
Mushure me 'Kutamba neNyeredzi,' ndainzwa kunge ndazviwana ini. Ndakanga ndisingadi kurasikirwa naye zvakare. … 'Kutamba neNyeredzi' zvakare kwakakiinurwa kwandiri yaive pfungwa yekuti ndinogona kuzvimiririra, 'Nikki anowedzera mubhuku rake. 'Ndinofunga zviri kukura pamwe semapatya, uyezve kuva nyeredzi zvichibva pairi twindom, asi kubatanidzwa ne mega-star [saJohn] kwakakanganisawo kumwe kwekutenda kwangu mandiri.'
Zvakangoitikawo, Nikki ave kuroorwa uye kutarisira mwana wake wekutanga ne iye 'DWTS' pro mudiwa , Artem Chigvintsev. Vaviri ava vakatanga kufambidzana mwedzi yakawanda mushure mekuparadzaniswa kwaNikki naJohn.
Olivia Munn atove 'akavhurika kudanana'
Wendy Williams 'mwanakomana achiri asingataure nababa mushure mekurwa pakati pevabereki kurambana kurwa: Rondedzera
Janet jackson murume wissam al mana
taraji p henson uye mukomana
kat kubva d inobvisa tattoo
sei john cena na nikki bella vakarambana
cassadee papa nguva dzese dzakaderera
huchi boo mai amai 2018